Ministirri Muummee Itoophiyaa qondaaltota 10 haaraa muudan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMinistirri Muummee Itoophiyaa qondaaltota 10 haaraa muudan
TEKELE UMA FACEBOOK PAGE/BBC
Ministirri Muummee Itoophiyaa qondaaltota 10 haaraa muudan.
(bbcafaanoromoo)–Ministirri Raayyaa Ittisa biyyaa kan turaniifi dhiheenya miseensummaa koree jiddugeessaa paartii Badhaadhina damee Oromiyaa keessaa yeroof dhorkamuun kan himamee obbo Lammaa Magarsaa aangoorraa kaafamuun bakka isaaniitti namni biraa muudameera.
Bakka obbo Lammaatti Dr Qana’aa Yaadataa Minisitira Raayyaa Ittisaa ta’uun mudamuusaanii ragaan fuula feesbuukii MM irratti maxxanfame ni mul’isa.
Kana malees, Geediyoon Ximootiwoos(PhD) abbaa alangaa waliigalaa ta’uun yoo mudaman, Dr Saamu’eel Hurkaatoo ammoo Ministira Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo ta’un muudamuun isaanii barameera.
Kantiibaa ittaanaa magaalaa Finfinnee kan turan injinar Taakkalaa Uumaa ammoo Ministira albuudaa fi boba’aa ta’uun mudamuun barameera.
Haaluma walfakkaatuunis obbo Tasfaayee Dhaabaa, itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa, Obbo Yohaannis Buwaayyaalaw, Daarektara Olaanaa Institiyuutii qorannoo tarsimoo quunnamtii alaa ta’anii muudaman.
Obbo Nugusuu Xilaahun ammoo Komishinara Komishinii Carraa Hojii Uumuu, Injinar Indaawwaq Abbitee ammoo daarektara ittaanaa Koroporeeshinii hojii sibiilaa fi injinarjii ta’uun mudamaniiru.
Kana malees, Obbo Fiqaaduu Tsaggaa ammoo ittaanaa abbaa alangaa waliigalaa yoo ta’an, Pirofeesar Hiruut Walda Maariyaam, sadarkaa ministeeraatti gorsituu damee hawaasummaa Ministira Muummee ta’uun muudamaniiru.
Injinar Taakkaalaa Uumaa aangoorrraa ka’usaanii ilaalchee fuula feesbuuk isaaniirrati ergaa dabarsaniin, waggoota lamaan darbaniif jiraattoota magaalaa Finfinnee tajaajiluunsaa akka gammachiseefi rakkoolee magaalattii hiikuufis kan danda’ameef mara taasisaa turu ibsan.
”Dargaggoofi barattoota qabannee imalleerra. Eegereef yaaduu keenyaaf ragaawwan keenya. Akkasumas kanneen humna hinqabneetti dhiyaachuu dhaggeefachuun ba’aasaanii qooddachuuf kan nuuf danda’amee hunda goonneera,” jechuun turtii hojiisaaniirratti yaadasaanii ibsan.
Kana malees Magaalaa Finfinnee hooggannuun carraa olaanaadha kan jedhan injinar Taakkalaan, ‘carraa seenaadhaan’ argannee akka akkasumaan hinbanneef yaalii taasifneerras jedhan.
በሁለት ዓመት ውስጥ የተቀየሩ 4 የመከላከያ ሚኒስትሮች!
ኢንጅነር አይሻ መሐመድ
ዶክተር ቀነዓ ያዴታ
የአንድ ሰው ቆይታ (Average)=0.5 አመት
Amid a flurry of government reappointments instigated by recent ethnic violence, Ethiopia’s premier on Tuesday replaced the country’s defense minister.